वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो : वन तथा वातावरणमन्त्रीसँगको अन्तरवार्ता « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौँ, १२ पुस : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दावी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र हेमन्त केसीसँग वार्तामा उहाँले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
संरक्षण क्षेत्रको क्षमता सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यस क्षमताभित्रका वन्यजन्तुलाई त्यही राख्ने र बाँकीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि वा अन्य कुनै विधिद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ? तेस्रो कदम यति गर्दागर्दै पनि फेरि द्वन्द्व सम्पूर्ण रुपमा निवारण हुन्छ त ? भन्दा केही न केही बाँकी हुन्छन् । वन्यजन्तुले आएर भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति पु¥याएको अवस्थामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीन क्षेत्रबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति सघाउन पु¥याउँछ । हामी यही ढङ्गबाट काम गरिरहेका छौँ ।
बाघ र गैँडा संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल ग¥यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा हुने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– त्यही कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा वन विकासबाहेक अन्यन्त्र खर्च गर्न पाइन्न । वृक्षरोपण, वन संरक्षण र विकासमै खर्च हुन्छ । यसले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो काम तत्काल गर्दैछौँ । यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षलाई पाँच करोड वृक्षरोपण वर्ष भनेका छौँ । पाँच करोड बिरुवा रोप्दै छौँ । यसको ठोस् कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ । वृक्षरोपणसम्बन्धी बुझाइ त्यति राम्रो छैन नेपालमा । तर यस वर्ष हामीले कहाँ कुन बिरुवा रोप्यौँ, त्यसको अवस्था के छ ? प्रस्ट हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं । वृक्षरोपणसम्बन्धी मान्छेका बुझाइ हामी बदल्छौँ ।
रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटामा पर्यटक जानु पर्दैन, आज किन त्यहाँ पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । किन चितवन, सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङमा मात्र पर्यटक गइरहेका छन् । यसको जवाफ के त त्यहाँ न्यूनतम् पूर्वाधार छैनन् । बाँकी ठाउँमा न्यूनतम् पूर्वाधार छन् । हो अब न्यूनतम् पूर्वाधार ती ठाउँमा बनाएरपछि नयाँ गन्तव्य खुल्छन् नि त । पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले सघाउन पु¥याउँदैन, यो कुनै बेठीक कुरा भयो ? यसले संरक्षणमा कुनै चुनौती थप्छ ? चितवन, सगरमाथामा न्यूनतम पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा ठीक त्यही कुरा रारा, खप्तड, मकालुलगायतमा गर्दा बेठीक हुन्छ ?
– हाम्रो बजेटरी सिस्टममा नआएका र बीचैमा अलमलिएका अन्य दातृ निकायबाट खर्च हुने रकमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालित गरेको छौँ । जस्तो विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालीकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु ग¥र्यौं।
देउवालाई नै पार्टी सभापतिमा चयन गर्न सक्यौं भने काँग्रेस र सरकारले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ : गृहमन्त्री खाँण (भिडिओसहित)
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टीले गति लिएको स्पष्ट